Maitiro Ekunyorera Tsamba kuMutongi Wekupinda - Kuenda Kune Dzimwe Nyika
ndeapi masms meseji pa iphone
zvinorevei kana ruoko rwako ruchirira
iphone haina kuwanikwa muitunes
iphone maapplication haana kukunda
Unganyora sei tsamba kumutongi wekupinda munyika? kana tsamba dzekurumbidza kwekutama. Iyo nhengo wepa mhuri kana shamwari Chivabvu nyora tsamba dzekutsigira kutama kuvatongi kupupurira iyo hunhu Hunhu hwe a munhu akasungwa nekutama uye kukumbira kuti uve kusunungura uye bvumidzwa gara Munyika. Tsamba idzi dzinodaidzwa Kanzura kweRubvisa tsamba .
Maitiro ekunyorera tsamba kune Immigration
Matipi ekunyora tsamba
Maitiro ekunyorera tsamba yekutama. Nyora tsamba kubva pamoyo. Usatombo kunetseka zvakanyanya nezve chimiro chayo. Be hwakadzama nezvehukama hwako nemusungwa kuitira kuti mutongi ave nemanzwiro ekuziva nhengo yemhuri yako.
Heano mamwe marongero ekuti unganyora sei iyi mhando yetsamba.
Tsamba yacho inofanira kunyorerwa Anokudzwa Mutongi Wekupinda .
Zvizivise iwe pachako, chinzvimbo chako chekufambisa uye kero. Kana iwe uri kuzviita mune yehunyanzvi kugona, iyo tsamba yemusoro inokwana uye hazvidiwe kuti uise yako wega kero.
Ndokumbira utaridze hukama hwako nemunhu uyu uye kuti wave nenguva yakareba sei uchimuziva.
Tsanangura mhando yemunhu zvauri, zviito zvaunoita pamwe chete, zvinosanganisira zvinobatsira kana zvakanaka zviitiko
zvayakakuitira, mhuri yako kana nharaunda; inosanganisira manzwiro mazhinji, ruzivo uye
chaiyo mienzaniso sezvazvinogona.
Tsanangura zvakashata mhedzisiro / matambudziko ezvinoreva kuti kugara muhusungwa kwemunhu uyu, kwavo
mhuri uye / kana nharaunda munharaunda.
Tsanangura chikonzero nei iwe uchitarisira kuti munhu uyu adzokere kudare rezvekupinda mune ramangwana mune ramangwana kuzoona nyaya yacho kusvika
mhedziso. Mune mamwe mazwi, munhu uyu ane mhosva here? Sei?
Mutongo wekupedzisira unofanira kutaura izvozvo Ini ndinopika zvataurwa pamusoro apa ichokwadi uye ndizvozvo maererano neni zvakanaka kuziva uye kunzwisisa .
Ndokumbira usayine uye zuva. Tsamba yacho haidi kuti ive notarized, asi kana zvichibvira, zvinobatsira .
Tsamba yacho inogona kunge iri mune chero mutauro, kunyange zvakadaro kana isiri muchirungu , panofanira kuve ne dudziro yakasimbiswa .
Kana zvichibvira, sanganisira a kopi kubva kwake ID Kuratidza kuti uri mugari wechigarire kana mugari weUS kuti uperekedze tsamba yacho.
Udza mutongi nezvezvakanaka zvakaitwa nemusungwa munharaunda yawanga uchigara. Taura kuti musungwa ava nhengo inokosha sei munharaunda. Kana usati wakambove nedambudziko repamutemo, sanganisira icho chokwadi mutsamba yako.
Hunhu Referensi Tsamba yeImigration Template - Mienzaniso
A hunhu hunoreva tsamba yekutama iwo akanyorwa kurudziro akamiririra mumwe munhu mukutsigira chako chekufambisa chirongwa kana imwe nzira inosanganisirwa. Vatongi vanoona nezvekufambiswa kwenyika vane hungwaru hwakati wandei. Chinangwa chetsamba iyi ndechekupa muyero mukufarira mutorwa nekuburitsa hunhu hwehunhu hwakadai sehunhu, kuvimbika, uye hunhu hwebasa.
Kunyangwe yakanyorerwa kunzwiwa kwepamutemo, iyi tsamba inofanirwa kunge iri chirevo chemunhu chinosanganisira ruzivo nezve:
Nhoroondo yehukama hwepamoyo kana hwehunyanzvi nemutorwa.
Hunhu hwakanaka hunoshamisa hunoratidzwa nemutorwa
Mipiro inotarisirwa yemunguva yemberi iyo mutorwa achaita kunharaunda yakafara
Iyo poindi apa ndeye kutaurira pfupi nyaya nezve zvakapfuura uye ramangwana remutorwa muUnited States uye nekupa akakosha ruzivo nezvehukama pakati peanotaura munyori uye mutorwa. Goverana anecdotes kuitira kuti tsamba iverenge zvishoma senge runyorwa rwezvikumbiro pane inganyore nhoroondo yemunhu.
Mashandisiro aungaita hunhu hunongedzo tsamba yekuenda kune dzimwe nyika
1. Tsvaga munhu anoremekedzwa munharaunda menyu
Kunge chero chirevo, simba rezvako zvirevo riri mu kuvimbika kwemunyori . Saka, edza kutsvaga mumwe munhu ane pesvedzero , seshamwari yekare kana mushandirwi. Kunyangwe nhengo dzemhuri dzichiwanzove dzichida kupa zvine hungwaru mareferenzi, zviri nani kutora mumwe munhu uyo haana hukama .
Zvichienderana nemamiriro ako ezvinhu, iyo USCIS iwe unoda kuona kuti munhu anozove neakanaka maitiro ekuva mugari weUnited States. Naizvozvo, kuwana kuendesa kubva kunhengo yakatosimbiswa uye mugari mukati meUnited States kunogona kutamba chinzvimbo chakakosha mukubudirira kwesapplication yako.
Pane nzira mbiri chete idzo munhu anogona kunyorera kutamira kuUnited States. Tsamba yekutsvaga yekupinda munyika inofanirwa kunyorerwa chero chinotevera:
2. Ipa ruzivo nezve yako mamiriro
Nepo chirevo chako chingave chichiziva zvishoma nezvenhoroondo yako wega, hazvikuvadze kupa kiyi ruzivo rwekuisirwa. Iwe unogona kunyora runyorwa rweakakosha mapoinzi kuti vaise iwo. Nhanho yekutanga mukunyorera kutamira kune dzimwe nyika muUnited States ndeyekuisa faira chikumbiro .
Kana iye anenge achinyorera achigara kunze kweUS, vanogona kuendesa fomu kuhofisi yeUSCIS iri munyika mavo kana kutumira chikumbiro netsamba kana pasina mahofisi aripo.
3. Nyora tsamba kwavari
Govera kunyora tsamba iwe pachako kana iwe uchifunga kuti izvi zvichafambisa zvinhu kumberi, kana kana iwe uchinetsekana nezve kugona kwako referensi kunyora chirevo chinomanikidza. Kunyangwe zvisingadiwe, ipfungwa yakanaka kuti tsamba iverengwe zvakaringana muChirungu. Kana mumwe munhu achinetseka kududzira tsamba yake yekunongedzera kuChirungu, vanogona kuhaya a mupepeti mukati mutsara wekukubatsira padambudziko rako.
4. Saina uye notarize tsamba
Sezvo tsamba iyi iri chirevo chepamutemo, inofanirwa kusainwa, kudheti uye notarized. Chengeta kopi yemarekodhi ako ega. Kana iye anenge achinyorera ari mukati meUnited States, kuwana gwaro rinozivikanwa ibasa riri nyore asi rinonetesa. Mazhinji mabhangi nemasangano emari anopa sevhisi iyi uye anogona kubhadharisa mari shoma.
5. Batanidza tsamba kuchikumbiro chako
Tumira tsamba pamwe nemamwe magwaro ekunyorera kuti uone kuti haizorasika mukugadzirisa kwekutonga. Vese vanyoreri vanofanirwa kuzivisa mumiriri wavo chero tsamba dzeferenzi. Mumiriri wako ndiye munhu akanyorwa pane fomu DS-261.
Ndiani wekusarudza kutumira?
Iyo mareferensi Hunhu hwemhando dzakasiyana idzi hunofanirwa kunyorwa nemumwe munhu padyo nemunhu, mumwe munhu anogona kupa yakananga mienzaniso uye chaiwo maanecdotes kubatsira kutsigira iye anonyorera hunhu hunhu nharo. Mumiriri anokwanisa kuve muvakidzani, nhengo yemhuri, shamwari, mushandirwi, kana nhengo yechechi yako.
Mune ino kesi, iyo yekuwedzera manzwiro kukanganisa iyo munhu ari mubvunzo anga ave nayo pahupenyu hwemunyori, uye zvinopesana, zvirinani. Kune avo vari muhusungwa vakatarisana nekubviswa munyika, kutumirwa kubva kuvana vavo (kana zvichibvira) kunowanzo kupa nyaya yakasimba.
Hunhu Referensi Kadhi - Muenzaniso 1
Ndiwo mufaro wangu mukuru kukwanisa kupa tsamba iyi pachinzvimbo cheshamwari yangu yakanaka uye muvakidzani Mustafah, uyo achangobva kunyorera kutamira kuJorodhani kubva kuUnited States.
Zita rangu ndinonzi Jonathon Mitchell, ndiri chiremba mukuru uye ndiri mugari weUS. Ndakatanga kusangana naMustafah paakatamira mukamuri rinotevera makore manomwe apfuura. Ndakafara kuva nemumwe chiremba munharaunda. Takakurumidza kuva shamwari uye zvakabva zvangondijekera kuti murume uyu akangwara sezvaari netsitsi. Ndiye ega murume wandinovimba naye kuti andirapire ini nemhuri yangu.
Sezviri pachena Mustafah akazvarwa ari murume ane hanya, zviri pachena kuti aifarira mushonga chete kubatsira avo vanoshaya uye kwete kubhadhara mari. Asati azvarwa mwana wake wekutanga, akazvipira kubatsira kudzidzisa vashandi vemuzvipatara kuGhana kweakawanda gore. Kubva paakadzoka, akazvipira kukiriniki isina dzimba maawa gumi neshanu pasvondo. Rupo rwake uye mutsa zvave kurudziro kwandiri uye kune vese avo vanoshanda nemurume.
Vaviri Mustafah nemukadzi wake mienzaniso yakanaka kuvana vedu, makore mashanu ne7. Sezvo mhuri dzedu dzaiuya pamwechete, vaichengeta vana vedu apo ini nemukadzi wangu taifanira kushanda. Zvichida zvakandishungurudza, mwanasikana wangu akafuridzirwa kuti avewo chiremba zvakare, kwete nekuda kwesimba rangu paari asi nekuda kwaSekuru Mustafah. Akagara ari pesvedzero huru pavanasikana vangu vaviri uye ndinonzwa ndakaropafadzwa zvechokwadi kuva nemuvakidzani anovabatsira kuva vakadzi vakasimba avo vakatotanga kuve.
Mustafah anofanirwa kuve mugari wenyika sezvo ari nhengo inokosheswa yenharaunda yaanogara. Ini ndinokurudzira kuti iwe uzvigadzirire nekukurumidza sezvazvinogona, isu tinoda vamwe varume vakaita saiye. Inzwa wakasununguka kundibata chero nguva pa (111) 111-1111 kana example@gmail.com kana iwe uine chero mibvunzo.
Hunhu Referensi Kadhi - Muenzaniso 2
Chivabvu 1, 2017
Ini ndinotumira tsamba iyi kutsigira chikumbiro chaEugenio Cruz chekugara zvachose muUnited States.
Zita rangu ndinonzi Jess O'Connor, uye ini ndiri Valleyway Human Services mushandi wezvemagariro uye mugari weUS. Ndakaziva VaCroz kweanoda kusvika makore maviri, kubvira pavakagara padhuze neni muna Chikunguru 2015.
Panguva ino, ini ndaona kuti Mr. Cruz murume ane mutsa, akatendeka, akavimbika uye anoshanda nesimba. Iye ndiye muvakidzani anopedzisa uye akurumidza kuzvimisikidza seyakakosha munharaunda medu.
Pane dzinoverengeka nguva yechando yapfuura, yakanyatsogadziriswa, VaCroz vakandikanda munzira yese. Iye anogara achibatsira vavakidzani vechikuru nemabasa epamba, uye kaviri akazvipira kuitisa bato regore reVashandi Zuva.
Kana fomu rako rekugara zvachose rikatenderwa, handina mubvunzo kuti ucharamba uchidzorera kunharaunda yekwako nenharaunda yenyika yose.
Ndokumbirawo usazeze kundibata kana uine chero mibvunzo.
Hunhu Referensi Kadhi - Muenzaniso 3
Anokudzwa Mutongi Wekupinda:
Ini ndiri Adrian Lisowski, ini ndine makore makumi mashanu nemasere, muPoland zviri pamutemo mutami, mugadziri anobudirira uye ndaziva Marta Lisowski, mukadzi wangu, kweanopfuura makore makumi matatu. Ndinokumbira kuti iwe ubvumire Marta kuti arambe ari munyika, sezvo kudzingwa kwake kuchave kwakakomba pamoyo uye mune zvemari pamhuri yedu.
Marta neni tine vana vana pamwechete, vaviri vacho vane vana vavo. Anoshanda semukuru wemhuri, achipa rutsigiro uye kuraira kana vana vari kunetseka, kuchengeta vazukuru vake pazvinenge zvichidiwa, kugadzirira kudya kwemhuri panguva dzezororo, uye kuona kuti tinochengetedza kutendeka kwesurname. Iye mukadzi ane simba uye musana weimba ino. Hazvirambiki kuti kudzingwa kwake zvachose kuchave nemhedzisiro yakaipa kuvazukuru vake, vana vake uye neni, murume wake angangoita makumi matatu emakore.
Yangu yekudyira zvakare inotsamira pamabatiro ehunhu emukadzi wangu, ndiye kumberi nekumashure maneja wemba, accountant, uye nekupedzisira mushandi akaomesesa. Mari yatinoita kubva kubhizinesi redu ndiyo chete sosi yekuwana mari uye iyo resitorendi yakatibvumidza isu kusimudza mhuri yedu nekumisikidza midzi yedu munharaunda medu. Handikwanise kufungidzira kuti tingaramba sei takavhurika iye asina iye pamufananidzo.
Iyi imhosva yemukadzi wangu uye kana akaendeswa kune imwe nyika nekuda kwayo, mhedzisiro yechirango yaizodarika mhosva iyi. Iye akatendeka, ane hanya mukadzi ane hunhu hwakasimba, uye chinzvimbo chake chete hachisi chiratidzo chaicho chemunhu anoshamisa waari. Ndinokumbira kuti umubvumire kugara munyika, kune vazhinji vedu vanovimba naye.
Tsamba yekutsigira mari yechibatiso
Kana munhu akasungwa neImigration uye Customs Enforcing (ICE), vanogona kukumbira kunzwikwa kwebond kuti kusunungurwe muhusungwa. Haasi munhu wese anokodzera kubhadhara mari yechibatiso. Vanhu vane zvimwe zvisungo zvematsotsi, semuenzaniso, vari pasi pekumanikidzwa kusungwa.
Kune vanhu vazhinji, bail inogona kuve sarudzo yekuti uburitswe muhusungwa. Kuti asunungurwe pachisungo, mutongi anoona nezvekupinda kwevanhu munyika anoongorora zvinhu zvakati wandei, kusanganisira zvisungo zvemunhu kunharaunda, njodzi chaiyo / inonzwisisika kunharaunda, uye kuti munhu wacho ane nzira yekubatsira vanotama (semuenzaniso, hupoteri).
Kuita sarudzo achishandisa izvo zvinhu, mutongi anofanira kuve nehumbowo hwekufunga. Ndipo panopinda tsamba yako. Iwe une mukana wekuudza mutongi kuti sei iwe uchifunga zvakachengeteka kusunungura uyu munhu uye nei iwe uchitarisira kuti iye adzokere kudare rekupinda mune ramangwana.
Nyora tsamba mumutauro wako wekuzvarwa, kunyangwe isiri Chirungu. Tora munhu anoziva mitauro yese kuti adudzire tsamba. Munhu wacho haafanire kunge ari mushanduri ane hunyanzvi.
Kana iwe ukashandisa muturikiri, kumbira Chitupa cheDudziro kubva kudare. Dzimwe nyika dzine fomu iri rinowanikwa kurodha pasi pamawebhusaiti edare. Muturikiri achazadzisa fomu kuti apike kuti zvese zvakadudzirwa ndizvo chaizvo. Tumira Chitupa Chekududzira, tsamba yekutanga, uye tsamba yakashandurwa kumutongi.
Disiki : Ichi chinyorwa chine ruzivo. Iri harisi zano repamutemo.
United States Dhipatimendi Rekupinda - URL: https://www.uscis.gov/
Muoni / mushandisi weiri peji rewebhu anofanirwa kushandisa ruzivo rwuri pamusoro chete segwara, uye anofanira kugara achibata zvinyorwa zviri pamusoro kana vamiriri vehurumende yemushandisi neruzivo rwepamusoro-soro panguva iyoyo.
Ziva kodzero dzako; dzidza maitiro ekuzvidzivirira iwe nemhuri yako panguva yezviitiko zvekupinda munyika
Guta University yeNew York; zvekuita kana iwe ukasungwa nevekupinda munyika
Mienzaniso yeTsamba Dzokuregerera Kwekupinda - ...
Mahara Mahara Ekufambisa Mabasa Kune Vanopinda